ဒုက္ခသည်များနှင့်ပြောင်းရွှေ့လာသောလူမိသားစုများအတွက်အများပိုင်ကျောင်းသတင်းအချက်အလက် | USAHello
USA တွင်, အများပြည်သူကျောင်းရဲ့အသက်အရွယ်အကြားစတင်သည်4နှင့်6နှင့်သည်အထိဆက်လက် 16 သို့ 18 အသက်အနှစ်. But you can send your children to pre-school at an early age. Learn about the different levels of school. Read about school placement.
ယူအက်စ်အေမှာကျောင်းသင့်ကလေးစတင်ရန်သင်ပထမဦးဆုံးကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်သင့်ကလေးမှတ်ပုံတင်ရန်ရမယ်. ဒါဟာသင်ကျောင်းသင့်ကလေးကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကျောင်းနှင့်နိမိတ်လက္ခဏာစာတမ်းများသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်. Learn what papers you need and about how your child is accepted. Read about school food and school requirements. Learn what to do if your child is absent and how to get to school.
Many people work in American school. There are teachers, ဒါပေါ့, but there are other people too who are there to help your child. သင်သည်သင်၏ကလေး၏ကျောင်းတွင်တွေ့ဆုံမည်ပြည်သူပြည်သားအချို့အကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
Schools in the USA do more than provide lessons. Schools and other organizations offer other great opportunities, such as field trips, outside activities, ဖြစ်ရပ်များ, နောက်ပိုင်းကျောင်းအစီအစဉ်များ, နဲ့နွေရာသီစခန်းတွေမှာ. Find out how to help your child participate in school activities.
ကလေးများအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုသွားရမယ်. သငျသညျကျောင်းကိုသင်၏သားသမီးမပို့ဘူးဆိုရင်, သင်သည်အမှုရောက်သောအတွက်ရနိုင်.
သငျသညျမှသင်တို့၏သားသမီးပေးပို့ဖို့ကျောင်းအဘယ်အရာကို type ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်. ကအခမဲ့ကြောင့်အများစုမှာကလေးငယ်များအများပြည်သူကျောင်းကိုသွားရ.
USA တွင်, ကလေးတွေအစားအများပြည်သူကျောင်းတွင်ပညာပေးရန်တခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်.
ကျောင်းသားများကိုတက်ရောက်ရန်ပေးဆောင်ရမယ်လို့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများရှိပါတယ်. အတော်များများကပုဂ္ဂလိကကျောင်းများအသင်းတော်များသို့မဟုတ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများကစီမံခန့်ခွဲနေကြ. တစ်ခုချင်းစီကိုပုဂ္ဂလိကကျောင်းကကွဲပြားခြားနားသောကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်. တချို့ကအရမ်းစျေးကြီးတယ်. သူတို့မိသားစုကပုဂ္ဂလိကကျောင်းတစ်ကျောင်းအဘို့အဆပ်ဖို့ငွေအလုံအလောက်ရှိမပါဘူးဆိုရင်ဒါပေမဲ့တချို့ကလေးများကျောင်းများသို့ သွား. ကူညီပေးဖို့ပညာသင်ဆုများ. Private schools often have different rules than public schools.
ကျောင်းနောက်ထပ်အမျိုးအစားစင်းလုံးငှားကျောင်းကိုဖြစ်ပါသည်. ပဋိညာဉ်စာတမ်းကျောင်းများတွင်အခမဲ့များမှာ. ပဋိညာဉ်စာတမ်းကျောင်းများရိုးရာအများပြည်သူကျောင်းများကဲ့သို့တူညီသောပညာရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း, ဒါပေမဲ့သူတို့ကအစိုးရကျောင်းများထက်ကွဲပြားခြားနားသောအော်ပရေတာများ, သောအစိုးရ operated နေကြတယ်. Charter schools do not have to follow some all the rules that public schools must follow. Your child will need to apply to enroll, and many charter schools haveawaiting list.
မူလစာမျက်နှာကျောင်းပညာရေးပညာရေး၏အခြားနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. Home-schooled students are taught by their parents. အိမ်မှာကျောင်းပညာရေးနှင့် ပတ်သက်. တိုင်းပြည်နယ်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်. မိဘအိမ်ကကျောင်းများအတွက်ပြည်နယ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို သိ. အဘို့နှင့်သေချာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်အောင်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်.